Time Core Messages M03 Grade R X | Wordworks
Ninomntwana wakho sebenzisani idayisi leTIME niziqhelanise nokubala
Ithuba ngalinye emntwaneni omncinci, iba lithuba lokufunda. Xa usonga usenza idayisi, mchazele umntwana wakho yonke into oyenzayo. Angakuncedisa afake iglu kwiindawo eziza kufuna ukuncanyathiselwa zidityaniswe futhi ke mhlawumbi angafuna nokufaka umbala emachokozeni okanye awahombise.
Mcele umntwana wakho ukuba aphose idayisi aze aphathe amachokoza kwicala ledayisi elijonge phezulu. Emva koku ke mncedise ukuba abale inani lamachokoza. Umntwana wakho ke uza kufunda ngamanani nokubala ngoko ke mncedise kakuhle futhi ungalindeli ukuba iimpendulo zakhe ziza kuchaneka zonke.
Ninomntwana wakho zamani ukuphatha ichokoza ngalinye, niwabale kunye nomntwana wakho uze ke umcele ukuba enze into efana nokuqhwaba izandla, ukutsiba, ukunqwala iintloko okanye ukubetha itafile abonise ukuba mangaphi amachokoza eniwabale kunye.
Umzekelo, amachokoza amathathu athetha ukuqhwaba kathathu okanye ukutsiba kathathu. Chithani imizuzu embalwa nisenza lo msebenzi. Ungaqhwaba okanye utsibe nomntwana wakho ukuze ube lula futhi umonwabise lo msebenzi.
Ividiyo: Uyenza njani idayisi